Iran inoti ndege dzehondo dzeU.S.
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Iran Kuputsa Nhau » Iran inoti ndege dzehondo dzeUS 'dziri mungozi' Mahan Air ndege yevatakuri
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • Iran Kuputsa Nhau • Israel Breaking News • nhau • chengetedzo • Siria Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Iran inoti ndege dzehondo dzeUS 'dziri mungozi' Mahan Air ndege yevatakuri
Iran inopomera ndege dzehondo dzeUS ku 'pangozi' Mahan Air ndege yevanofamba
Iranian media inoti iyo US Air Force murwi jets 'zvisina kuchengetedzeka akabata' Iran's Mahan Mhepo ndege dzevafambi vari munzira kubva kuTehran kuenda kuBeirut, zvichikonzera 'kukuvara' kune vakawanda vakatakura. Pakutanga vakuru veIran vakapomera chiitiko ichi, icho chakaitika pamusoro peSyria, nendege dzemauto eIsrael.
Mahan Air Flight 1152 yaive munzvimbo yekuSyria pamusoro penzvimbo yeAt-Tanf ichiyambuka neIraq payakatorwa nevaviri varwi veF-15 Jets dzaiuya dzakamanikidza kuti ikurumidze kuchinja nzira nekukwira, zvichikonzera kukuvara kwakati wandei pakati pevatakurwi, vamiririri vendege. akadaro.
Pakutanga nhepfenyuro kubva kuzvapupu zvakaona zviri mubhodhi yakataura nezve ndege dzeIsrael, uye dzakadzokororwa nenhepfenyuro dzekunze. Mukuru weFlight 1152 akazotaurira veIran venhau venhau Fars kuti vatyairi vacho vaizvizivisa seUS Air Force panguva yeredhiyo.
Mumiriri weIran kuUN Majid Takht-Ravanchi akange azivisa Secretary-General Antonio Guterres nezve chiitiko ichi, uye akayambira kuti "Islamic Republic of Iran ichatora United States" kana paine njodzi ingangoitika ndege iri munzira kudzokera kuTehran, kune mutauriri weIranian Ministry Ministry Seyed Abbas Mousavi.
NeChina manheru manheru ndege yakanga yadzokera kuTehran zvakachengeteka, asi vanokwana vatatu vatakakwira vakakuvara muchiitiko ichi.
Iyo yekumisikidza yakaitika padhuze neAt-Tanf muganho unoyambuka neIraq, sekureva kwesangano renhau reSANA SANA. IUS yakaumba nzvimbo yemauto munzvimbo iyi.
Mahan Air munhu akazvimiririra wega weIran anotakura vanhu. Yakaiswa pazvirango zveUS kurwisa "vanowedzera zvombo zvekuparadza vazhinji nevatsigiri vavo" muna Zvita 2019, yekutakura mauto nemidziyo yeIslamic Revolutionary Guards Corps (IRGC).